JMP Lawyer - ukuhlawulwa victims of kunokwenzeka ingozi - ukuhlawulwa personal injury, Lille, Paris, Emntla - Abaqondisi-mthetho ka-Us-intanethi!
JMP Lawyer - ukuhlawulwa victims of kunokwenzeka ingozi - ukuhlawulwa personal injury, Lille, Paris, Emntla
Emva kokuba umsebenzi kunokwenzeka ingozi, ikhusele kuwe
I-victim-mthetho ezindleleni kunokwenzeka ingozi, ibangela kwi ngamanye amaxesha trauma ingqondo injury, a lawyer defends kuwe ngendlela kobuso insurers kwaye avoids a ukuhlawulwa yakho kunokwenzeka ingozi e a isaphuleloLe mali-sum imbuyekezo yakho kunokwenzeka ingozi emsebenzini yi-arhente yokhuseleko lwezentlalo ndlela ayiyo kugqityiwe. I-kunokwenzeka ingozi kunye nokonzakala kwabo kwimeko a isebe lemicimbi yenkcubeko nemidlalo liza kuba kaninzi ngokulawulwa nokulungisa kwaye imbuyekezo, ukuba ukuziqhelanisa wathabatha indawo okanye hayi kwi-club.
Rape, udushe kwaye assault, ebangela umonakalo psychological okanye yesitalato, okanye umyinge ka-ITT (yethutyana kwaye iyonke ukhubazeko), ube unelungelo nje imbuyekezo.
I-victim i kunokwenzeka ingozi - kuwa, traffic kunokwenzeka ingozi, assault, ebangela a trauma kwi intloko - kwenu banelungelo nokulungisa rhoqo uphezulwana kakhulu kunokuba ufuna anikele insurers. Biker rugged okanye rugged scooter, moped, bike, usondele kakhulu eboniswe kwi ezinzima bodily injury. I-Badinter umthetho uchaza iimeko kuba imbuyekezo elifanelekileyo kuba bonke yakho nokonzakala kwabo.
Nayiphi na victim i kunokwenzeka ingozi ibangela kwi personal injury (okanye ukhubazeko) ingaba kujongenwe kunye kabini mngeni: kufuneka kuqala confront a trauma ukuba upsets ngesiquphe ubomi bakhe kwaye ukuba lwakhe, rhoqo kuzo zonke iindawo.
Ngaphezu koko, weakened kwaye shock, kuya kufuneka ukuba, ukongeza kwi-ukhathalelo complications ubuso leqela le kwaye rhoqo ixesha-consuming, vis-à-vis i-inshorensi, ubulungisa, umqeshi wakhe, kwaye kwiimeko lezempilo.
Ezi yolawulo nemigaqo-nkqubo iya kuba uninzi rhoqo experienced njengoko i-obstacle kunjalo kwaye isinyanzelo. Baya gqiba ukuba uthatha i-akhawunti ye-bodily injury kwaye mental ukuba ufuna banyamezele, umgangatho imbuyekezo ufumana, kwaye, kwi-jikelele indlela, imiqathango ye-umbutho (ezi zinto kwaye isebenziseke) ubomi bakho emva kunokwenzeka ingozi. Ngenxa yokuba fumana ngokwakho kwi imeko ka-inferiority kwaye frailty, yesitalato kwaye kwendlela, kubalulekile ukuba wena nosapho lwakho kusenokuba surrounded, encediswa, advised kwaye defended ngoko nangoko emva yakho kunokwenzeka ingozi. Kubalulekile indima lawyer kwi-bodily injury Yona ikunceda kuwe ngendlela crucial amanyathelo yenza wena ingakumbi ukuba banga ubunyani inyaniso yazo zonke nokonzakala kwabo kwaye omnye umonakalo intlungu njengokuba victim i kunokwenzeka ingozi. Kubalulekile ukuba lo mqathango, kuya kuba kangangoko unako ukuzuza, at iziphumo zonyango ukuhlolwa kokusebenza kwaye izigqibo eziza kwenziwa, eyona inqanaba imbuyekezo kunokwenzeka, zonke yakho umonakalo othe. Ukumbule ukuba zonke insurers babophelelekile yi-izivumelwano kwaye ngokufanayo umdla, apho poses enkulu imingcipheko bias kwi izigqibo ithathwe ngokomthetho imbuyekezo ukuba kunokwenzeka ingozi victims. Kufuneka ilungelo walile i-kunikela ka-imbuyekezo ukusuka yakho kuphela. Kubalulekile phantse rhoqo yakho eyona inzala. Ga kuko konke ngakumbi kubalulekile ukuba ukwamkelwa i-kunikela ka-imbuyekezo egameni lakho kuphela yi-engathndwayo ukuba abe revocable. Kubalulekile ukuba a lawyer ngokuphonononga ufuna ukwenza othile, uvavanyo iimeko kwaye zoko yakho kunokwenzeka ingozi. Sabeka e yakho ukulahlwa i-ingcali kagqirha - geqe we-inshorensi, iinkampani - abaya kuqhuba elizeleyo kovavanyo yakho imeko ye-kunokwenzeka ingozi victim ukwandisa umda we imbuyekezo ukuba kunokwenzeka ingozi victim. Ngamanye amaxesha enxulumene yezithuthi kunokwenzeka ingozi, ngamanye amaxesha ekuhambeni umsebenzi okanye leisure umsebenzi (umzekelo: emidlalo injury), ingqondo nokonzakala kwabo musa kutyhila zonke neziphumo zaso kuphela emva elide ngokwe xesha. Ukuhlola yangoku umda kwixesha elizayo zoko yakho trauma, siza kuthatha uhambo ngomsebenzi oluya elizeleyo kovavanyo yakho urhulumente ekuhambeni ka-elizimeleyo zonyango kwaye oriented nge yakho lawyer.
Akekho thatha ingqalelo zonke yakho umonakalo othe
Kuthathelwa ingqalelo zonke zoko yakho imo (langoku, elizayo, kwaye progressive), siya kukwazi isiqinisekiso kufuneka i-inqanaba ukuhlawulwa yakho injury ngaphandle ngokufanayo komlinganiselo kunye yintoni i-inshorensi iinkampani kunikela spontaneously ukuba kunokwenzeka ingozi victims. Nayiphi na imiqobo kunokwenzeka ingozi, kunokwenzeka ingozi, assault, kunokwenzeka ingozi emsebenzini okanye commuting, njalo-njalo, sifuna sizathu i-personal injury. Oku umonakalo uza ngenxa kwi-ingqwalasela ka-ilahleko ukuba asingawo onke, strictly ukuthetha, bodily injury. Yowiso-mthetho ubonelela, jikelele, i-ukuhlawulwa bonke harms intlungu yi-kunokwenzeka ingozi victim. I-kwenzakala lowo ngokulawulwa a nokulungisa ayikho limited ukuba emva-iziphumo kwaye lwempahla ethengiswa ukukhubazeka ebonakalayo. Baye kanjalo ziquka kwendlela okanye umonakalo othe psychological (extra-kwezoqoqosho), kwezoqoqosho umonakalo othe (kuquka ilahleko ye umvuzo), kwaye injury kwi abo jikelele victim, ngqo victims commonly subsumed phantsi appellation"victims yi-ricochet". Zonke ezi ukumona wenziwe nomcimbi ka-elizeleyo uhlolo kwaye ingqalelo, yi-nogqirha wakho kunye a lawyer.
Kweli banga, nto leyo eza kuvumela kunye quantify i-harms kunye nokumisa zabo, ukuthembeka, ukwenza izinto elubala ukuba kunokwenzeka ingozi yi decisive isigaba ngokomthetho imbuyekezo.
I-inkampani ye-inshorensi onoxanduva imbuyekezo ye kunokwenzeka ingozi victim asiyiyo eyona ally ka-yokugqibela. Ngezizathu of iindleko-ukusebenza lula ukuqonda, i-inkampani ye-inshorensi iya bakholisa ukunciphisa, okanye nkqu evade abanye izikhundla ka-ngokwasemalini, apho kunyhasha ilungelo imbuyekezo kuba kunokwenzeka ingozi victim.
Nayiphi na victim i kunokwenzeka ingozi kunye bodily injury ingafunyanwa, imbono ka-imbuyekezo, ezixabisekileyo uncedo oluvela a lawyer umntu kwi-nokulungisa ye-physical umonakalo.
I-lawyer kusebenza ukuhlanganisa amaqela ukuba ingaba kwalomgaqo-siseko ukuba umbutho we-ukhathalelo iinkalo zobuchule kunye nokuhlolwa-mali ilahleko ezibangela ukuba ukususela kunokwenzeka ingozi. I-aid wazisa ukuba victim kanjalo uya kuba bayathetha kunye insurance company, isixa-mali imbuyekezo, okanye, kwimeko njl, ukuze ufake isicelo enkundleni ukuya kufuna-matyala iinkalo zobuchule. National solidarity ngu exercised ngomsebenzi ezahlukeneyo imali kwaye ukubhatala nee-arhente, apho kuba obandakanyekayo xa intloko umonakalo ayikho yafumanisa okanye akanguye solvent. Ezi ziquka: CIVI (kuba victims yolwaphulo-mthetho) i-ICC kwaye ONIAM (kuba zonyango neengozi), FGAO (Isiqinisekiso, ingxowa-Mali ka-Compulsory i-Inshorensi Umonakalo) jikelele i-kunokwenzeka ingozi victim - ukuba victim ngu wamonzakalisa okanye nkqu mntu ubhubhileyo - ubona yakhe kwayo yonke imihla ubomi, ngamanye amaxesha impilo yabo zabo livelihoods disrupted ukusuka ngenye imini elandelayo mini. Kubalulekile i-imeyl ukuba idibanisa kwi-imeyl: i-imeyl ka-ngqo victims. I-imeyl rhoqo ophunyezwe phezu kwi cwaka kwaye apho isifrentshi umthetho omiselwe nihamba ukuthatha komlinganiselo. Izinto zitshintshile kwi-mthetho inqanaba I-ngqo victims, kungenjalo ngokuba victims yi-ricochet, ngoku kuba lunxulumano amalungelo ukuhlawulwa zabo umonakalo othe: kwimeko apho i-ezinzima kunokwenzeka ingozi, kwaye kwimeko yokufa. I-imbuyekezo apho baya anelungelo nkqu uyaya ngaphaya imbuyekezo yabasebenzi i-kwendlela umonakalo enyanisweni experienced yi-usapho. Ke ngoku ibandakanya i-pathologies commonly kwaphuhliswa yi-aphele ilandelayo ye-kunokwenzeka ingozi: intlungu kwaye bebandezeleka, lwempahla ethengiswa wokubandezeleka, osisigxina (DFP). 'A lawyer kwimicimbi Yasekuhlalweni Umthetho kuba amashumi amabini eminyaka, majored kwi-isemthethweni redress kuba umonakalo umzimba, i-ingcali kwi-traffic neengozi, kwaye umsebenzi, ndibeke wam amava e yakho yenkonzo, umoya ka-emamele, uphawula i kubalulekile oluntu umlinganiso-ethile ukuqhubela kwiimeko ingakumbi painful kwaye dramatic.
Consumer Protection - ngamazwe association of abaqondisi-mthetho Levant Partners
Kodi ya wanasheria - Kampuni ya sheria LMD wataalamu wa kodi ya madai